Otu esi etinye asụsụ mmemme Swift na Fedora 35 - LinuxCapable
October 27, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Asụsụ Mmemme Swift
Otu esi emelite Swift
Otu esi ewepu (wepu) ngwa ngwa
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Asụsụ Mmemme Swift na sistemụ Fedora 35 gị.
Site na ndabara, Swift dị na ebe nchekwa Fedora. Nyere Fedora bụ ntọhapụ ọnwa isii ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile nwere ụdị Swift kachasị ọhụrụ dị ma e jiri ya tụnyere nkesa ndị ọzọ ebe ọ bụ ihe ochie ma ọ bụ na-adịghị adị ma ọlị, na-eme ka ntinye ahụ bụrụ usoro ngwa ngwa.
Nke mbụ, tinye Swift na ya dnf tinye iwu dị ka n'okpuru.
Iji nyochaa nrụnye Swift, jiri iwu a lelee ihe nrụpụta na ụdị.
Ọmụmaatụ n'ọnụ ọnụ:
Maka mmelite na Swift, jiri ọkọlọtọ ume ọhụrụ.
Nke a ga-emelitekwa ngwungwu ndị ọzọ emechiela anya na sistemụ gị, nke a dịkwa mma ka idobe sistemu ọrụ nchekwa nchekwa.
Iwepụ asụsụ ahụ dị mfe maka ndị ọrụ na-achọkwaghị Swift na sistemụ Fedora ha kemgbe etinyere ya site na iji njikwa ngwugwu dnf.
Na njedebe gị, mebie iwu a:
Ụdị Y, wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu ma mezue mwepụ ahụ.
Categories Fedora Tags Fedora 35, Swift Mail igodo
Otu esi etinye GIMP na Fedora 35